Akụkọ - Shida Carbon kwagara n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na Chengdu, China.
Mgbe ọ nọrọ na isi ụlọ ọrụ ochie na No.47 Yongfeng Road maka ihe karịrị afọ 10, ugbu a Shida Carbon na-akwaga n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na Chengdu maka ihe ndị na-achọwanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na mgbasawanye nke azụmahịa anyị.
Isi ụlọ ọrụ ọhụrụ a dị na Hi-tech district, Chengdu, agbata obi Alibaba Group, Tencent Group, na ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama ndị ọzọ.Ọ bụ a dum n'ala nke 1200㎡ na magburu onwe akụrụngwa, ike nabata gburugburu 100 ọrụ na-arụ ọrụ n'otu oge site na-enye a nnọọ mma gburugburu ebe obibi.
Na mmemme mmeghe, onye isi oche nke Shida Cabon- Mr Liu Weidong na-agwa ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ Chengdu okwu, o kwuru na mmeghe nke isi ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị abụghị naanị mgbanwe nke ebe ọrụ kamakwa ọ bụ ihe dị ịrịba ama nke mmepe Shida 30 afọ. , Anyị bụ ndị si Shanxi n'ógbè ma kwaga Sichuan afọ 20 gara aga, anyị malitere mmepụta anyị site na obere nha ma ugbu a, anyị na-emepụta ọkwa UHP nnukwu diameters, anyị malitere ule na obere ọkụ ladle na ugbu a, anyị na-enye ndị niile isi ígwè. ndị na-emepụta ihe n'ụwa nile;N'azụ ihe ịga nke ọma niile bụ ndị dị uchu na ndị siri ike nke Shida bụ ndị na-aga n'ihu mgbe nile ka ha dịkwuo mma ma dị ike, na site na mmalite ọhụrụ a, ndị Shida ga-anọgide na-aga n'ihu, ma na-achọ ihe mgbaru ọsọ kachasị elu nke ịmepụta carbon zuru ụwa ọnụ. ika.Mgbe o kwusịrị okwu ya, ndị ọrụ nchịkwa gbupụrụ rịbọn ahụ ma kwupụta mmeghe nke isi ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Site na 2001 ruo 2021, site na Shanxi ruo Chengdu, site na 700㎡ ruo 1200㎡, site na φ250mm ruo φ700mm, site RP ruo UHP, site n'oge gara aga ruo n'ọdịnihu...... Shida Carbon na-aga n'ihu na-egbuke egbuke mgbe niile. !
Nabata ndị mmekọ anyị niile ka ha gaa na ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị.